भरत तालमा डुबेका युवक २४ घण्टा बित्दा पनि पत्ता लागेनन्
सर्लाही : सर्लाहीको बागमतीस्थित निर्माणाधीन भरत तालमा डुबेर बेपत्ता भएको २४ घण्टा बितिसक्दा समेत युवकको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। हिजो दिउँसो तालमा माछा मार्न गएका बागमती नगरपालिका– १ मिलनचोकका १८ वर्षीय सुशान्त थापा मगर बागमती नगरपालिकाले वडा नं. १२ मा १२१ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिरहेको भरत तालमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए।माछा मारेर हातखुट्टा धुन गएका थापा दिउँसो ४ बजेतिर तालमा डुबेका हुन्। डुबेका थापालाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय मिलेर रा
बेलबारी । भनिन्छ जन्म,मृत्यु र विवाह जन्म अघिनै लेखिएको हुन्छ,अझ विवाह पछि त सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम समेत खाईन्छ । तर बाँचुञ्जेल सँगै भएपनि मृत्यु भनेचाँहि फरक समयमा नै हुने गरेको छ । तरपनि मोरङको बेलबारी ११ भाङबारीमा भने एक पौडेल दम्पत्तिले २४ घण्टा नबित्दै यो संसार छोडेका छन । लामो समयदेखि नशा... The post बेलबारी ११ भाङबारीमा २४ घण्टा नबित्दै श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु appeared first on Purbeli News.